Aristas en Apple Music, mbola ao anaty beta, te-hanitatra ny tratra Avy amin'ny mac aho
Aristas ao amin'ny Apple Music, mbola ao anaty beta, te-hanitatra ny tratra
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia niresaka momba ny serivisy vaovao natolotr'i Apple ho an'ny artista, vondrona mozika ary olon-kafa izay izahay atolory ny mozika amin'ny alàlan'ny serivisy streaming mozika, mba hahafantaran'izy ireo amin'ny fotoana rehetra misy ny feon-kira ataon'izy ireo, izay hira henoina indrindra, ny sokajin-taona manintona azy ireo, ireo tanàna (tsy firenena fotsiny) izay henoina indrindra ... arak'i Apple fa io no dia tsy maintsy manana an'ny vondrona mozika na mpihira rehetra.
Ny tsy ateriny amin'izao fotoana izao dia ny vola azony tamin'ny famoahana ny hiran'izy ireo, satria ny algorithm hikajiana azy dia miankina amin'ny lafin-javatra maro ary tsy asa azo isaina amin'ny fotoana tena izy, toy ny hoe izany rehetra izany angona izay aseho amin'ny alàlan'ity serivisy ity, serivisy iray izay ao anatin'ny dingana beta, fa avy any Cupertino dia te-hanitatra izy ireo vondrona sy mpihira maro kokoa no manomboka mampiasa azy.
Mpanakanto misarika ny saina: Manala ny fidirana amin'ny Apple Music for Artists izahay! Mitehiriza toerana amin'ny beta ao amin'ny https://t.co/0fBvVBLnVI. pic.twitter.com/PLoHeE8Lea
- Apple Music (@AppleMusic) March 13, 2018
Ity serivisy ity, raha manome fampahalalana momba nyhira na rakikira amidy miaraka na misaraka amin'ny iTunes, na dia tato anatin'ny taona vitsivitsy aza, ny fanjifana mozika dia niova tanteraka tamin'ny serivisy mozika mivantana, karazana serivisy izay nampihena ny piraty ihany koa ao amin'ity sehatra ity, na dia misy aza izy io.
Raha vondrona mozika na mpihira ianao ary misy amin'ny Apple Music ny mozika dia azonao atao ny mijanona Ity rohy ity manomboka andramo ny serivisy fanadihadiana natolotr'i Apple.
Araka ny tarehimarika ho an'ny daholobe farany momba ny isan'ny mpanjifa Apple Music, Ny serivisy fandefasana mozika an'i Apple dia misy 38 tapitrisa an'ny mpamandron-karama, raha 8 tapitrisa kosa no mizaha ny fotoana malalaka natolotr'i Apple ho an'ny olona rehetra izay mbola tsy nanandrana izany mandraka androany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Aristas ao amin'ny Apple Music, mbola ao anaty beta, te-hanitatra ny tratra
Hitan'izy ireo fa marefo ny Safari ao anatin'ny hetsika hacker Pwn2Own
Homekit: ny fomba fanamboarana ny afovoany an-trano